Golaha wasiirada oo hay’adda NILE u qabatay inay dalka uga baxdo muddo 7 maalmood ah – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Golaha wasiirada oo hay’adda NILE u qabatay inay dalka uga baxdo muddo 7 maalmood ah
War goordhaw soo gaaray xafiiska warbaahinta Bulshoweyn ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ay muddo 7 maalmood ah u qabteen hay’ad Turki ah, kana howlgasha gudaha magaalada Muqdisho.
Golaha wasiirada oo kulan gaar ah ah maanta ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa hay’ada NILE waxay u qabteen inay muddo 7 maalmood ah uga guuraan dalka Soomaaliya, iyadoo arrintaasi lagu xiriirinayo afgambigii dhicisoobay ee ka dhacay dalka Turkiga.
Ilaa iyo haatan lama oga qaabka arrintaan loo caddeyn karo, balse waxaa jiray arrin muddo soo jiitameeysay oo ay dowladda Turkiga daba joogtay hay’adaas, iyadoo ku eedeyneysa inay argagixiso xiriir la leedahay, waxaana hore u jiray dalab ay dowladda Turkiga u jeedisay dowladda Soomaaliya, kaas oo ahaa in Soomaaliya laga eryo hay’adaasi, kahor intuusan dhicin afgambigii dhicisoobay.
Dhinaca kale, hay’adda NILE ayaa adeegyo waxbarasho iyo caafimaad oo muhiim ah u haayay dadka Soomaaliyeed, waxaana cad inay sababsatay siyaasadaha qaarkood oo qalafsan ee madaxweyne Recep Tayyip Erdogan.
Golaha wasiirrada waxay isku raaceen qodobada soo socda iyadoo la tix gelinayo codsiga dowladda aan walaalaha nahay ee Turkiya:
Inla joojiyo adeegyadii ay bixin jirtay Nile Academy ee dugsiyada, isbitaalada iyo wixii kale oo hoos yimaada.
In howl wadeenada Nile Academy ay mudo 7 cisho gudaheed ah dalka uga baxaan oo ka bilaabaneysa 17 July 2016.
Dowladaha Soomaaliya iyo Turkiya waxay si wada jir ah u balan qaadayaan in adeegyadii caafimaad iyo waxbarasho ee ay bixin jirtay Hay’adaasi sidoodii u socon doonaan. Maamul cusubna loo yeeli doono.
Si kastaba ha ahaatee, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku qasbanaatay inay fuliso dalabka madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan, waxayna arrintan kusoo beegantay xilli uu ka bad-baaday isku day afgembi lagu sameyn lahaa xukuumadiisa.